Global Voices teny Malagasy » Mamaly ny Fangataham-pisarahan’ilay Zazavavy Yemenita 8 Taona ireo Mpampiasa Aterineto ao Maghreb · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Desambra 2018 11:40 GMT 1	 · Mpanoratra Lydia Beyoud Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Maraoka, Tonizia, Yemen, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tanora, Vaovao Mafana
Mamaly lahatsoratra iray navoakan'ny Yemen Times  (pejy voafafa) momba an'ankizivavy kely iray 8 taona miezaka mametraka fisarahana ara-panambadiana aminà lehilahy iray 30 taona voalazany fa noteren'ny rainy hovadiany ny bilaogera Toniziana Stupeur!! Un nouveau depart!! .
Manoritsoritra ilay raharaha ny mpanao gazetin'ny Yemen Times, Hamed Thabet:
Tonga irery tany amin'ny fitsaràna i Nojoud Muhammed Nasser ny Alarobia 2 Aprily, nitady mpitsara afaka handray ny raharahany manohitra ny rainy, Muhammed Nasser, izay nanery azy hanambady an'i Faez Ali Thamer, lehilahy zokiny 22 taona, roa volana lasa izay. Nangataka fisarahana ihany koa ilay zazakely, nanameloka ny vadiny ho nanao herisetra an-tokatrano sy ara-nofo azy.
Araka ny lalàna Yemenita, tsy afaka mampiakatra fitsaràna i Nojoud satria mbola tsy ampy taona izy. Na izany aza, nihaino ny fitarainany ny mpitsara Muhammed Al-Qathi ary nibaiko ny fisamborana ny rainy sy ny vadiny.
Manoratra i Stupeur!! Un nouveu depart!! :
Isika valo taona izany nijery Captain Majed, Goldorac sy Takaya Todoroki, nilalao baolina sy kanety ary nanao fangalampiery. Ireo ankizivavintsika nilalao saribakoly na nisary ho mpampianatra sy dokotera.
Amin'izao, valo taona ry zareo efa miatrika fitsaràna, mangataka fisarahana ara-panambadiana aminà lehilahy nanerena azy.
Zazavavy kely tonga irery teny amin'ny fitsaràna tany Sanaa i Noujoud Mohammed Nasser, izay nangatahany fanampiana tamin'ny mpitsara. Nametraka fitoriana tamin'ny rainy izay nanery azy “hanambady” olona maherisetra, nanao herisetra ara-nofo taminy.
“Isaky ny mba te hilalao eo an-tokotany aho, nodarohany ary notereny ho any amin'ny efitra fatoriana.”
Hatraiza no halehan'ireo Homo-ignorans [Olona minia tsy te hahalala ireo]?
Amin'ny fomba ahoana no afahafantsika mbola maheno zavatra tahaka izany amin'izao taonjato faha-21 izao? Ary mbola manontany tena ny antony maharatsy laza ny Arabo ihany isika! Mbola manontany tena ny antony andraisan'ny olona antsika ho toy ny mpampihorohoro tsy mivelatra.
Ary aza miezaka miteny amiko akory fa tranga iray naningana io! Mateti-mpitranga tokoa izao saingy mahalana no misy mpiteny. Tsy mijanona eo amin'ny ankizy ihany izany fa hatrany amin'ny tovovavy sy ny vehivavy lehibe kokoa.
Niteraka tsikera maro miainga amin'ny “maharikoriko” ka hatrany amin'ny fideràna ny herimpon'ilay zazavavy kely sy ny fanantenana ny tsy hisian'ny tranga toy izao any an-kafa ny lohatenin'ilay lahatsoratra, “Ces arabes qui ne nous ressemblent pas” (Ireo Arabo tsy toa antsika), ankoatra ny olana efa misy eo amin'ilay tranga:
Nesorina taminy ny fahazazany sy ny tsy fananan-tsinin'ity zazavavy kely ity! Ary akory izany herimpo nananany nankanesany irery teo alohan'ny mpitsara!!! Tokony horaràna sy hosaziana ny fomba baribariana tahaka izao! Manantena aho fa tsy hitovy amin'izy ireo mihitsy isika!
Ampahatsiahivin'ny tsikera iray hafa ireo mpamaky fa tsy olana ara-piaviana ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona fa andraikitry ny fanjakàna:
Mitovy amin'ny olombelona rehetra ny Arabo! Hta eran'izao tontolo izao ireo mpanodikoina zaza tsy ampy taona, ary maharikoriko izany. Tsy olana ara-piaviana izy io fa kosa an'ireo fanjakàna sasany tsy mandray andraikitra ametrahana lalàna mametra ny taona farany ambany ho an'ny fanambadiana sy ny fanekena azo antoka.
Mamaly io fanehoankevitra io, nanoratra ny iray hafa:
Marina mihitsy izany ry Mad Djerba, tsy manambady zazavavy 8 taona ny Tandrefana satria misy ny lalàna manakana azy ireo tsy hanao izany; kanefa tsy manakana azy tsy hanolana azy ireo izany…
Mamaly ny bilaogera iray be fihetsehampo:
Namaky ny tantaran'io zazavavy io aho androany tao amin'ny Corriere della Sera [iray amin'ireo gazety Italiana be mpamaky indrindra]. Minoa ahy, latsaka ny ranomasoko ary nandritra ny 5 minitra, tsy nahateny na inona na inona aho…Tokony homelohina tsy misy hataka andro ny firenena toa an'i Yemen: endriky ny fampihorohoroana ny fanolanana ankizy kely tsy manantsiny, nefa dia leferin-dry zareo izany. Ho ahy, mbola ratsy nóho ny fampijaliana izany…Tena incazzato [sosotra] aho noho io…Feno fankahalàna ato anatiko!
Manamafy ny sasany amin'ireo fihetsehampon'ilay bilaogera, manoratra ny iray hafa:
Tsy misy zavatra hireharehàna any amin'io faritr'izao tontolo izao io…Miorina any amin'ny lasa mihitsy ny Fotoana Volamena [na ny marina kokoa, Fotoan'ny Torimaso]*. Ary tsy ho atsy ho atsy ny fotoam-pifohazana…
Milaza kosa ny bilaogera iray farany, mahatsiaro ireo andron'ny sosialisma tao Yemen:
Ary rehefa eritreretina fa tamin'ny 1972 tao amin'ny [tanànan'i ] Aden, tanatinà firenena nitabataba ny sosialisma isika, miaraka amin'ireo tovovavy sy adolantsento mankany amin'ny lisea miaraka amin'ny sipany tsy misy ahiahy…Mampalahelo be ahy ity tantara ity, maha-te hitroatra.
(*Tsilalaonteny izy ity. Amin'ny teny Frantsay, mitovy ny fanonona ny “d'or” (volamena) sy “dort” (matory).)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/12/21/131937/
 Yemen Times: http://yementimes.com/article.shtml?i=1145&p=front&a=2
 Stupeur!! Un nouveau depart!!: http://blog.kochlef.com/?p=466